[Puntland] G.Baarlamaanka oo raadinay inuu soo laabto & Xubno FDS oo riixaya [Warbixin]
Monday August 20, 2018 - 06:59:07 in Wararka by Super Admin
Baarlamaanka Puntland oo Puntland oo la kala dirayo Dhamaadka Bisha October ayaa durba waxa bilowday loolan ay xubnaha Baarlamaanka ugu jiraan inay soo laabtaan.
Gudoomiyaha Baarlamaanka PL ee wakhtigan Axmed Cali Xaashi ayaa ka mid ah dadka xusul duubka xoogan ugu jira inuu dib u helo saxeexa Isimada Gobolka Sanaag Gaar ahaan Suldaan Said Abdisalaam oo ah Duubka soo saxeexa Xubinta Gudoomiyaha Baarlamaanka, hase ahaatee waxa soo baxaya in Suldaanku u sheegay in aanu dib Saxeexa u siinayn sababa la xidhiidha awood qaybsiga beelaha & isaga oo Mudo dheer ahaa xubin Baarlamaan.
Xubno Siyaasiyiin ah oo Baarlamaanka Somaliya ku jira kana soo jeeda Gobolka Sanaag ayaa Suldaan Siciid C/salaam kala hadlay inuu dib u soo xulo Axmed Cali Xaashi; waxana xubnahaasi ka mid ah olalaha la wada ka mid ah Siciid Daahir Bootaan oo ay Qaraabo dhow yihiin Suldaan Said & Axmed Cali Xaashi.
Gudoomiyaha Baarlmaanka ee wakhtigiisu Gaba Gabada yahay waxa aaanay xidhiidh fiican mudoba lahayn Madaxweynaha PL oo ay ay kula aragti duwanyihiin Arrimaha Doorashada warar aan la hubin Sugnaanshahooda ayaa sheegaya in Gudoomiyihu uu fadhi qarsoodi ah la yeeshay Madaxweynaha PL kana codsaday inuu ka taageero sidii uu dib ugu soo laaban lahaa hase ahaatee Madaxweyne Abdiweli M.Cali Gaas ayaa ka Gows-gaabsaday isaga oo Badhi-taaraya Musharaxa kale sida aanu warka ku helayno.
Xildhibaano uu ka mid yahay C/xakiin Xaaji M Dhooba-daareed ayaa ah kuwa safka hore ugu jira inay sanadka isu sharaxanaa Afhayeenka Baarlamaanka isaga oo dhowr jeer oo hore tartamay hase ahaatee aan Guulaysan.
Warar kale oo dheeraad ah ayaa sheegaya in Nin Sumcad wanaagsan Reer PL & Guud ahaan Gobolka Sanaag ku leh hadeerna ah Gudoomiyaha rugta Ganacsiga PL Maxamed Caydiid Jaamac Dibad uu ka mid yahay dadka aadka loo hadal hayo inuu Afahyeenka Baarlamaanka Noqod, in kastoo aanu weli shaacin inuu raadinayo.
M.Caydiid Jaamac Dibada waa Ganacsade Somaliyeed wuxuu ka mid yahay Guddiga Laf-dhabarta u ah Wadada Ceeldaahir .